समुदाय - Dalit Online
एमाले १० औँ महाधिवेशन : पदाधिकारी सहित ४४ जनाको केन्द्रीय सदस्यमा दिने सम्भावित उम्मेदवारी
काठमाडौं —नेकपा एमाले १०औं महाधिवेशनलाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यो महाधिवेशनलाई सबै हिसावले महत्वका साथ हेरिएको हो । महाधिवेशनले ३०१ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने छ । यो महाधिवेशनमा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अघिल्लो महाधिवेशनभन्दा घट्ने छ । ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पु¥याउन खोजे पनि २९–३० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना छ […]
कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारको दलित मुक्ति आन्दोलनसँगको साइनो
काठमाडौं —दलित आन्दोलनका अगुवा तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तिलक परियार कर्णाली प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त भएका छन् । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियारलाई कर्णाली प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो । लामो समयदेखि कम्युनिष्ठ आन्दोलन र दलित मुक्तिका लागि संघर्षरत परियार यसअघि प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुख थिए । उनलाई तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले […]
के भीमबहादुर विश्वकर्माले न्याय पाउँलान् ?
फेरि उही प्रवृत्तिको हत्या प्रकरण दोरियो मन्दिर प्रवेशको निहुँमा निसर्त हत्या भयो । हत्या मन्दिर प्रवेशको निहुँमा भयो । तर समाजले यसलाई सर्ष स्वीकार गर्ने पक्षमा फिटिक्कै छैन । फेरी प्रश्न उब्जिएको छ , के भीमबहादुर विश्वकर्माले न्याय पाउँलान् ? जात व्यवस्थाकै कारण हत्या भएको प्रस्ट देखिने घटनाको प्रकृति यो दुर्गा मन्दिर प्रवेश हत्या प्रकरण […]
चितवनमा गैरदलितबाट भिम विश्वकर्माको हत्या
काठमाडौं —दलित समुदायले मन्दिरमा गएर सामुहिक रुपमा पूजा गर्न पाउनु पर्ने आवाज उठाउँदा गैरदलित समुदायबाट कुटपिट गरी दलित समुदायको हत्या गरिएको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–४ का ५८ वर्षीय भिमबहादुर विश्वकर्माको गैरदलित युवाहरुले कुटपिट गरेर हत्या गरिएको हो । असोज २८ गते (दशैको महानवमीको दिन) भरतपुर महानगरपालिका ४ स्थित दुर्गा मन्दिरमै गएर दलितहरुले पनि पुजा […]
संविधान, दलित हक र उपलव्धी
नेपाली दलित समुदायको समेत ठूलो त्याग, समर्पण र वलिदानका कारण गठन भएको संविधानसभाले नयाँ संविधान जारी गरेको छ वर्ष पुरा गरेको छ । संविधानमा दलित आन्दोलनले उठाएका सवालहरु संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तहरुमा समावेश गरिएको छ । दलित आयोगलाई संवैधानिक वनाइएको छ । मुलत छुवाछुत विरुद्धको हक, भूमि, आवास, रोजगारीको हक, समानुपातिक समावेशीकरणको […]
दलितका लागि दुई विकल्प : विद्रोह की पलायन ?
भारतका संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरको एउटा प्रसिद्ध भनाई छ । हिन्दु भएर जन्मिनुमा मेरो नियन्त्रण थिएन तर हिन्दु नभएर मर्ने कुरामा मेरो नियन्त्रण छ । अतः मैले हिन्दु धर्मको शोषण, दमन र उत्पीडनबाट राहत पाउन बुद्ध धर्म ग्रहण गर्छु र यसैमा मर्छु । अहिले यो भनाई नेपालका दलितहरुको सन्दर्भमा पनि ठ्याक्कै मिल्ने देखिन्छ । […]
ग्राण्ड फिनालेमा प्रवेश गरेका किरण गजमेर को हुन् ?
काठमाडौं– द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ३ का चार उत्कृष्ट प्रतिभाहरु छानिएका छन् । शुक्रबार भएको सेमिफाइनलमा चार वटा टीमका एक–एक जना प्रतिभाहरु ग्राण्ड फिनालेमा प्रवेश गरेका छन् । सबैभन्दा कडा प्रतिस्पर्धा मानिएको टीम प्रमोदबाट किरण गजमेर फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् भने सिक्किमका रवि गहतराजको भ्वाइसको यात्रा टुंगिएको छ । एक सातासम्म दर्शकले गरेको भोटका […]
´दलित युथ फोर्स` निर्माण [तस्बिरहरु]
काठमाडौं— राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानको युवा संगठन ´दलित युथ फोर्स`(दलित जागरण युवा दस्ता) निर्माण भएको छ । खड्क नगरपालिकाको नगर सम्मेलनबाट राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानले नगरस्तरीय ´दलित युथ फोर्सञ निर्माण गरेको हो । नगर र वाडा स्तरदेखिनै निर्माणको सुरुवात भएको ´दलित युथ फोर्स`( दलित जागरण युवा दस्ता ) अभियानस्वरुप सबै जिल्लामा विस्तार हुने […]
कालोपट्टी बाँधेर जातीय छुवाछुतविरुद्ध गोरखामा प्रदर्शन
गोरखा — जातीय छुवाछुतविरुद्ध गोरखा सदरमुकाममा दबाबमुलक प्रदर्शन भएको छ । रुपा सुनारदेखि जातीय विभेदकारी सबै घटनाका दोषीलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै आइतबार जिल्ला सदरमुकाममा संयुक्त सचेत दलित संघर्ष समितिले कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेको हो । ‘जातीय भेदभाव, छुवाछुत र कसुर सजाय ऐन अक्षरस पालना गर, शब्द र बोलीमा होइन व्यवहारमा लागू गर, समाज बदल्न […]
काठमाडौं — तथाकथित उच्च जात कहलिएकाहरुले सामाजिक संजाल लगायतको संचार माध्यममा दलितले कोठा नपाउने बाहुनले कोटा नपाउने जस्तो निकृष्ट नारा अघि सार्दै आरक्षण पक्षधरभन्दा विपक्षधरको हुंकार डरलाग्दो छ । आरक्षणको चर्चा–परिचर्चा अहिले व्यापक छ । आरक्षण चर्चा– परिचर्चा गरिएको विषय हो । यो बहस चर्चा–परिचर्चा त्यही वर्ग समुदायले बढी गर्छ । जसलाई आरक्षण दिन नचाहने […]